DMC-FZ1000GA Lumix Digital Camera - Panasonic
FZ1000 အား ခံစားကြည့်လိုက်ပါ။
25-400mm/F2.8-4.0 LEICA DC lens နှင့် 1 လက်မရှိသော MOS ပါဝင်ခြင်းကြောင့် FZ1000 မှ ဓာတ်ပုံများနှင့် 4K ဗီဒီယိုများတွင်ပင် မကြုံစဖူးမြင့်မားသော အရည်အသွေးကို ယူဆောင်လာပါသည်။ အသုံးဝင်သော ဤပစ္စည်းမှာ စွမ်းဆောင်ရည်ရော သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူမှုကိုပါ ရရှိနိုင်သည်ကို တွေ့ရှိရပါလိမ့်မည်။
သင်သွားတဲ့ နေရာတိုင်းမှာ သင်ဘာလဲဆိုတာကို ဖော်ပြလိုက်ပါ။
အမြင့်မားဆုံး ဓာတ်ပုံအရည်အသွေးပါဝင်တဲ့ အထင်ကရ Bridge ကင်မရာ
1လက်မရှိသော ကြီးမားသည့် Sensor က ပေးစွမ်းတဲ့ အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံတွေနဲ့ lens အသစ်တွေက ဘဘာဝရဲ့ အကန့်အသတ်မရှိ နက်ရှိုင်းမှုနဲ့ နေရောင်ခြည်ရဲ့ နွေးထွေးကို ဖော်ပြပါတယ်။ 16x အလင်းဆိုင်ရာ zoom သည် သစ်ကိုင်းပေါ်မှာနားနေတဲ့ ဌက်သေးသေးလေးတွေကနေ မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းကို ဖြတ်နေတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေအထိ အရာရာတိုင်းကို အနီးကပ်မြင်နိုင်စေပါတယ်။ ကြည်လင်တဲ့ 4K resolution နဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ဒါမှမဟုတ် ဗီဒီယိုတွေကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ။DMC-FZ1000 က သင်ရိုက်ကူးဖိုိ့လိုအပ်တဲ့ သင့်နားမှာရှိတဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို လုံးဝ သူ့သဘာဝအလှအတိုင်း ရိုက်ကူးနိုင်စေပါတယ်။
အထင်ကြီးစရာကောင်းလောက်အောင် သိမ်မွေ့သော အရာများကို ရိုက်ကူးလိုက်ပါ
ညက်ညောပြီး လှပသည့် မှုန်ဝါးအောင်ပြုလုပ်သော အထူးပြုလုပ်ချက်
DMC-FZ1000 ၏ ထူးခြားချက်မှာ သင့်နားမှာရှိတဲ့ တောက်ပပြီးလှပတဲ့ကမ္ဘာကြီးကို သဘာဝအတိုင်းညှင်သာတဲ့ ထိတွေ့မှုလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ ဖော်ပြနိုင်သည့် အရည်အသွေးရှိခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အသစ်ပြုလုပ်ထားသော LEICA DC VARIO-ELMARIT မှန်ဘီလူးတွင် အလင်းဆိုင်ရာဒီဇိုင်းနှင့် ဝိုင်းသောဖန်သားမှန်ဘီဘူး5ခု၏ ကောင်းမွန်သင့်မြတ်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း ပါဝင်ပြီး ၄င်းတို့အား Panasonic ၏ ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ ဝိုင်းသောမှန်ဘီလူးပုံသွင်းခြင်း နည်းပညာဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းသည် မမြင်ရသော အနားကွပ်လိုင်းများ ပြုလုပ်ပြီး သင့်ဓာတ်ပုံများတွင် အထင်ကြီးလောက်သောမှုန်ဝါးအောင်ပြုလုပ်သည့် အထူးပြုလုပ်ချက်တစ်ခုနှင့် ရိုက်လိုသောအရာကိုထင်းပြီးနောက်ခံကိုမှုန်ဝါးစေရန်အတွက် ကြီးမားသော MOS အာရုံခံပစ္စည်းများနှင့် ပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်ပါသည်။
မြူးကြွပြီး အသက်ပါသော လှုပ်ရှားမှု
အရည်အသွေးမြင့်မားသော 4K ဗီဒီယို
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး 4K ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်း* အတွေ့အကြုံကို ခံစားလိုက်ပါ။ ပြင်ပတွင် အမှန်တကယ်ရှိပြီး resolution မြင့်မားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို နူးညံသော လှုပ်ရှားမှုဖြင့် ခံစားလိုက်ပါ။ ရိုက်ကူးရေး အခြေအနေများနှင့် လိုက်ဖက်စေရန် အသံစုပေါင်းခြင်း လက္ခဏာအား ချိန်ညှိနိုင်ခြင်းနှင့်အတူ Stereo / Shotgun Microphone (DMW-MS2**) ဖြင့် အသက်ပါသော အသံမှတ်တမ်းခြင်းကို ပေါင်းထည့်ပါ။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွယ်စုံကောင်းမွန်မှုကို ရရှိစေနိုင်ရန်အတွက် full-HD 100 fps video***ဖြင့် ဖန်တီးမှုဗီဒီယို အနေအထားနှင့် ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းဆန်သော နှေးကွေးတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းသို့ ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။
*June 12, 2014. မှ စတင်ထုတ်လုပ်သော ကျစ်လစ်ပြည့်စုံသည့် ကင်မရာတစ်လုံး 4K ဗီဒီယိုများအား 29 မိနစ် 59 စက္ကန့်အထိ ရိုက်ကူးနိုင်ပါသည်။ 4K ဖြင့် ဗီဒီယိုများ ရိုက်ကူးနေစဉ်တွင် UHS Speed Class3အဖြစ် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကတ်တစ်ခုကို အသုံးပြုပါ။** သီးသန့်ရောင်းချပါသည်။*** ရိုက်ကူးခြင်း foramt ဟာ 25p ဖြစ်ပါတယ်။
အခိုက်အတန့်တွေကို အမိအရ ဖမ်းယူလိုက်ပါ
ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်းနှင့် လျှင်မြန်သော တုံ့ပြန်မှု ရုတ်တရက် ထွက်ပေါ်လာမယ့် နောက်ထပ် Shutter အတွေ့အကြုံကို အမိအရ ဖမ်းယူဖို့အဆင်သင့် ဖြစ်နေပါစေ။ focus စနစ်နှင့် အသစ်ဖြစ်သော DFD (Depth From Defocus) နည်းပညာ* ကို အလျားလိုက်မော်တာ ပေါင်းထည့်ပြီး အသုံးပြုနေကျဖြစ်သော အလင်းအမြန်နှုန်းရှိတဲ့ AF သို့ ပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့် ပိုပြီးကောင်းမွန်သော တိကျမှုနဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အမြန်နှုန်းကို ခန့်မှန်းခြေ 0.09 sec** စက္ကန့်နှင့် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ လျှင်မြန်သော စတင်ဖွင့်ချိန်စက္ကန့်နှင့် resolution အပြည့်ရှိသော ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးခြင်းများ ပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့် ဘဝမှာတစ်ခါသာရနိုင်တဲ့ အခိုက်အတန့်တွေကို တစ်သက်လုံးတည်တံ့တဲ့ အမှတ်တရတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။ * ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းတစ်ခုတည်းသာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။
** CIPA စံနှုန်းများ။ Live View Finder ကို အသုံးပြုချိန်
အသစ်ဖြစ်သော LEICA DC VARIO-ELMARIT lens အား DMC-FZ1000 အတွက် အထူး ဖန်တီးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ Telephoto ရိုက်ချက်တွေအတွက်တောင် မှုန်ဝါးခြင်းမဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးတဲ့ F2.8-4.0 ရှိတဲ့ တောက်ပမှုရှိပြီး 25mm wide-angle အား 16x optical zoom* ထိ တိုးချဲ့ပေးတဲ့ မြင်ကွင်းထောင့်တစ်ခု ရှိပါတယ်။ အဝိုင်းပုံစံ မျက်နှာပြင် 8 ခုနှင့်ဖြစ်သော ED lenses4ခုနဲ့ အဝိုင်းပုံစံ lenses5ခု အပါအဝင် အုပ်စု 11 ခုမှ အစိတ်အပိုင်း 15 ခုပါဝင်ခြင်းနှင့်အတူ အသစ်ဖန်တီးထားတဲ့ ဤ lense မှာ မြင့်မားတဲ့ MTF တန်ဖိုးရရှိထားပါတယ်။ အဝိုင်းပုံစံဖန် မှန်ဘီလူးများအသုံးပြုခြင်းသည့် မမြင်ရသောအစွန်းလိုင်းများနှင့်အတူ လှပပြီး ညီညာစွာချောမွတ်နေသော မှုန်ဝါးစေခြင်းကို ရရှိပြီး Panasonic ၏ ထူးခြားသော အဝိုင်းပုံစံ မှန်ဘီလူးပုံသွင်းခြင်း နည်းပညာမှ ပြုလုပ်ထားပါသည်။
* 35mm ကင်မရာနှင့် ညီမျှသော - 25-400mm.
1-လက်မ 20.1-megapixel MOS Sensor
အသစ်ပါဝင်တဲ့ 1လက်မ အရွယ် 20.1-megapixel အာရုံခံနိုင်စွမ်း မြင့်မားတဲ့ MOS Sensor ဟာ S/N အချိုးကို မြှင့်တင်ထားပြီး ISO12800 / တိုးချဲ့ထားသော ISO25600တွင် ရိုက်လျှင်ပင် ဆူညံမှုအနည်းဆုံး ဓာတ်ပုံတွေကို ရိုက်နိုင်ပါတယ်။ အလင်းရောင်ပမာဏများပြားခြင်းက အထင်ကြီးစရာကောင့်သည့် ရိုက်လိုသောအရာမှာထင်းပြီးနောက်ခံကိုမှုန်ဝါးအောင်ပြုလုပ်ခြင်း အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ၄င်းသည်သင့်အား များပြားသော ဓာတ်ပုံရိုက်သည့် အခြေအနေများတွင် အမှန်တကယ်ကို အံ့အားသင့်စရာကောင်းတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ဖန်တီးနိုင်စေပါသည်။
Venus Engine တွင် အရောင်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းမြင့်မားစေရန်နှင့် သဘာဝအတိုင်းဖော်ပြချက်ဖြင့် resolution မြင့်မားသော ဓာတ်ပုံများကို ရရှိစေရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ချက်များစွာပြုလုပ်ပေးနိုင်သော NR၊ သုံးဖက်မြင် အရောင်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အလင်းဝင်ပေါက်ရှိ စစ်ထုတ်မှုပြုလုပ်သည့်ကိရိယာတို့ ပါဝင်ပါသည်။ အာရုံခံမှုမြင့်မားသော MOS Sensor များနှင့် Venus Engine ၏ ပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့် ကျစ်လစ်ပြည့်စုံသော ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာ၏ ကန့်သတ်ချက်ကို ကျော်လွန်စေသော အံ့အားသင့်စရာကောင်းသည့် ဓာတ်ပုံအရည်အသွေးကို ရရှိစေပါသည်။
အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင် ကောင်းမွန်တဲ့ macro ရိုက်ချက်များအား အနည်းဆုံး focus ပြုလုပ်နိုင်သော အကွာအဝေးဖြစ်သည့် 3cm တွင် ရိုက်ကူးနိုင်ပါသည်။ ပန်းများ၊ အင်းဆက်များ စသည်တို့ကို လက်ဖျားခါလောက်အောင် အသေးစိတ် ဖော်ပြရန်အတွက် DMC-FZ1000 နှင့် အနီးကပ်ဓာတ်ပုံများကို ရိုက်ကူးနိုင်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး 4K ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်း*
DMC-FZ1000 တွင် ထူးခြားကောင်းမွန်သော 4K ဗီဒီယို ရိုက်နိုင်သည့် အင်္ဂါရပ် ထည့်သွင်းထားပါသည် (QFHD 4K: 3840 x 2160, 25 fps in MP4)**. ပုံမှန် ရုပ်ငြိမ်ဓာတ်ပုံအဖြစ်သာ ရရှိသည့် ကောက်ကာငင်ကာရိုက်ချက်များကို ရိုက်ကူးနိုင်စေရန်အတွက် 4K ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းမှ 3840 x 2160 8-megapixel နှင့်ညီမျှသော ဓာတ်ပုံများကို ဖြတ်တောက်စေနိုင်ခြင်းဖြင့် ဓာတ်ပုံဖန်တီးမှုပုံစံအသစ်ကို ကဏ္ဍသစ်တစ်ရပ်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါသည်။
*June 12, 2014. မှ စတင်ထုတ်လုပ်သော ကျစ်လစ်ပြည့်စုံသည့် ကင်မရာတစ်လုံး**4K ဗီဒီယိုများအား 29 မိနစ် 59 စက္ကန့်အထိ ရိုက်ကူးနိုင်ပါသည်။ 4K ဖြင့် ဗီဒီယိုများ ရိုက်ကူးနေစဉ်တွင် UHS Speed Class3အဖြစ် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကတ်တစ်ခုကို အသုံးပြုပါ။
ဗီဒီယိုများသည် အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး အလွန်အမင်း လက်တွေ့ကျသည့် Dolby® Digital stereo အသံများဖြင့် ထွက်လာပါသည်။ stereo zoom မိုက်ခရိုဖုန်းတွင် zoom ဆူညံမှုလျှော့ချသည့် စနစ်ပါဝင်ပြီး အလိုအလျှောက် လေသံဖြတ်တောက်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်သည် နောက်ခံလေမှ ဆူညံသံအများစုကို တားဆီးပါသည်။
DMW-MS2* Stereo/Shotgun မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်အတူ သင့်အနေဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်သည့် အခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်အတွက် အသံစုဝေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။
ညက်ညောသော အဆင့်5ငါးဆင့် zoom ဆွဲခြင်း
16x optical zoom ဆွဲခြင်းကို ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းမှာလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်အနေဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်သည့် အခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီရန် ပိုမိုညက်ညောသော zoom ဆွဲခြင်းအတွက် အနှေးမှအမြန် အမြန်နှုန်း5ခုဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ အလွန်အမင်း zoom ဆွဲပြီးရိုက်လျှင်ပင် လက်တုန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည့် တုန်ခါမှုကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် အဆင့်မြင့် ဓာတ်ပုံငြိမ်စေသည့်ကိရိယာ HYBRID O.I.S.+ ကို တပ်ဆင်ထားပါသည်။
HYBRID O.I.S. (Optical Image Stabilizer) နှင့် 5-axis correction* ပေါင်းစည်းခြင်းသည် သင့်အား မှုန်ဝါးမှုနည်းသည့် လက်တစ်ဖက်တည်းဖြင့် ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းကို ပေးပါသည်။ ၄င်းသည့် ကင်မရာ၏ လှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစား5ခုဖြစ်သည့် horizontal, vertical, axis of rotation, vertical rotation နှင့် horizontal rotation ကို အာရုံခံပြီး ၄င်းတို့အတွက် ပြန်ထေပေးပါသည်။
Full-HD နှင့်ဖြစ်သော မြန်နှုန်းမြင့် ဗီဒီယို
သင့်အနေဖြင့် မြန်နှုန်းမြင့် ဗီဒီယိုများအား full-HD အရည်အသွေးဖြင့် 100 fps*တွင် ရိုက်ကူးနိုင်ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် ပကထိမျက်စိဖြင့် မမြင်ရသော မြင်ကွင်းများကို ရိုက်ကူးနိုင်ပြီး ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းဆန်သော နှေးကွေးသည့် လှုပ်ရှားမှုအနေဖြင့် ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ပုံမှန်ထက်အရှိန်နှေးထားသော ရိုက်ချက်များနက္ခတ္ထဗေဒ လေ့လာခြင်း၊ ပန်းများပွင့်လန်းလာခြင်း သို့မဟုတ် တိမ်တိုက်များ တရိပ်ရိပ်လွင့်နေခြင်းကဲ့သို့သော တည်ငြိမ်သည့် အရာဝတ္ထုများကို ရိုက်ကူးခြင်းအတွက် ကင်မရာအား ဒီအတိုင်းထားထားပါ။ ပုံမှန်ထက်အရှိန်နှေးထားသော ဗီဒီယိုတစ်ခု ရိုက်ကူးရန်အတွက် အခန်းဆက်အလိုက် ရိုက်ထားသော ဓာတ်ပုံစီးရီးများကို ကင်မရာထဲတွင် ပေါင်းစည်းနိုင်ပါတယ်။
DFD နည်းပညာနှင့်ဖြစ်သော အလျားလိုက် မော်တာဖြင့် Focus ပြုလုပ်သည့်စနစ်နှင့် အလင်း၏ အမြန်နှုန်းရှိသော AF
focus စနစ်သို့ထည့်သွင်းထားသည့် အသစ်ဖြစ်သော အလျားလိုက် မော်တာသည် အသုံးပြုနေကျဖြစ်သော DMC-FZ200 နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် 275% ပိုမိုမြန်ဆန်သော* focusing ကိုရရှိပါသည်။ ထို့ပြင် အသစ်ဖြစ်သော DFD (Depth From Defocus) နည်းပညာ**သည် focus ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သော အချိန်ကို တိုစေပါသည်။ ၄င်းသည်ရိုက်လိုသော အရာဝတ္ထု၏ အကွာအဝေးအား မတူညီသော ကြည်လင်ပြတ်သားမှု အဆင့်နှစ်ခုရှိသော ရုပ်ပုံနှစ်ခုကို ချင့်တွက်ခြင်းဖြင့် တစ်ပြိုင်နက် တွက်ချက်ပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ခန့်မှန်းခြေ 0.09 sec*** (wide-end) / approx. 0.17*/**** sec (tele-end) ရှိသော အလွန်လျှင်မြန်သည့် AF ကိုရရှိပါသည်။ * Panasonic ကုမ္ပဏီတွင်း စမ်းသပ်ခြင်း ** ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း တစ်ခုတည်း အတွက်သာ အသုံးပြုပါသည်။
အများဆုံး 1/4000 စက္ကန့်ရှိသော လျှင်မြန်သည့် Shutter အမြန်နှုန်း
အများဆုံး 1/4000 စက္ကန့် (at wide-end) / 1/3200 စက္ကန့် (at tele-end) ရှိသော လျှင်မြန်သည့် Shutter အမြန်နှုန်းသည် လျှင်မြန်စွာ ရွေ့လျားနေသည့်အရာဝတ္ထုများအား ကောက်ကာငင်ကာ ရိုက်ကူးစေနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ၄င်းသည် သင့်အား အိမ်အပြင်ဘက်တွင် ရှိနေလျှင်ပင် အလင်းဝင်ပေါက်ကို ပွင့်စေနိုင်ပါသည်။ အများဆုံး 1/16000 စက္ကန့်ရှိခြင်းကြောင့် ပြင်းထန်သော နေရောင်ခြည်အောက်မှာတောင် နေရောင်ခြည်ကြောင့်ဖြစ်သော အကွက်များကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
12 fps ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးခြင်းမြန်နှုန်းမြင့် ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးခြင်းများအား 20.1-megapixel full resolution ဖြင့် 12 fps တွင် ရိုက်ကူးနိုင်ပါသည်။ ခန့်မှန်းခြေ 0.66 sec ရှိသော လျှင်မြန်စွာ စတင်နိုင်ခြင်းနဲ့အတူ မှန်ဘီလူးထွက်သည့်အချိန်တိုခြင်းကြောင့် DMC-FZ1000 မှ သင့်အား တဒင်္ဂအတွင်းရိုက်ရမည့် အခွင့်အရေးများကို သေချာပေါက် ရိုက်နိုင်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။
DMC-FZ1000 သည် လျှင်မြန်စွာ အကြီးချဲ့လျှင် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သော နေရောင်ခြည်အောက်တွင်ပင် တည်ငြိမ်သော ဖရိန် နှင့် ထိပ်တန်း မြင်နိုင်စွမ်းရရှိစေရန် သေချာစေသည့် 2,359k-dot OLED LVF (Live View Finder) ကို ဂုဏ်ယူပါသည်။ OLED မျက်နှာပြင်သည် resolution ကို တိုးမြင့်စေသလို အနည်းဆုံးသော time lag နှင့် မြန်နှုန်းမြင့် တုံ့ပြန်ချက်ရှိသလို အဆင့်မြင့် အရောင်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် မြင့်မားသော ထင်းကနဲ မြင်သာမှု ရရှိစေပါသည်။
အပေါ်မှမြင်ရသည့် 921k-dot LCD သည် အနုပညာဆန်သောဖရိန် ကို ရရှိစေပါသည်။ အလင်းရောင်နည်းသော AF
အလင်းရောင်နည်းသော AF အား လရောင်အောက်တွင်ပင် AF အထောက်အကူပြုမီး မပဲပါ ရိုက်လိုသည့်အရာပေါ်တွင် ပိုပြီးတိတိကျကျ focus ပြုလုပ်နိုင်စေရန် ထည့််သွင်းထားပါသည်။
Pinpoint AFPinpoint AF သည် 3x to 10x အတွင်း အကြီးချဲ့ခြင်းတွင် မည်သည့်အကြီးချဲ့ခြင်းမျိုး မဆို ပြုလုပ်နိုင်စေပါသည်။ ဥပမာအနေဖြင့် မျက်လုံးထဲရှိ သူငယ်အိမ်တည့်တည့်အား focus ပြုလုပ်ရာတွင် အထောက်အကူပြုပါသည်။
ဖန်တီးမှုကောင်းမွန်သော ထိန်းချုပ်မှုသည် ဓာတ်ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုများသို့ အနုပညာရှင်ဆန်သော ခံစားမှုရသနှင့် မူလ ခံစားမှုရသများကို ထည့်သွင်းစေနိုင်ပါသည်။ မျက်နှာပြင်ကို တစ်ချက်ထိလိုက်ပြီး ကင်မရာကို ဆုံလည်လှည့်လိုက်ရုံဖြင့် ဒေါင်လိုက်/အလျားလိုက် Panorama ဓာတ်ပုံများကို ဖန်တီးစေနိုင်ပါသည်။[Filter အထူးပြုလုပ်ချက်] Expressive, Retro, Old Days, High Key, Low Key, Sepia, Monochrome, Dynamic Monochrome, Rough Monochrome**, Silky Monochrome**, Impressive Art, High Dynamic, Cross Process, Toy Effect*, Toy Pop*, Bleach Bypass, Miniature Effect*, Soft Focus**, Fantasy, Star Filter**, One Point Color, Sunshine* / **
လက်ကိုင်အကွင်းအား ဘယ်ဘက်လက်ဖြင့် သက်တောင့်သက်သာကိုယ်နိုင်ပြီး zoom နှင့် focus ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ၄င်းသည် သဘာဝနှင့် အလိုအလျှောက်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ထောက်ပံ့ပါသည်။
Focus PeakingFocus Peaking ဆောင်ရွက်ချက်များသည် MF နှင့် AF+MF mode များတွင် foucs ပြုလုပ်ခြင်းရဲ့ အထွတ်အထိပ်ကို ပြသပါသည်။ ၄င်းလုပ်ဆောင်ချက်အား Wi-Fi* မှတစ်ဆင့် အဝေးမှ ဓာတ်ပုံ/ဗီဒီယို ရိုက်ကူးခြင်းအတွက်လည်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ကင်မရာများတွင် RAW အချက်အလက်များ တိုးတက်မှုDMC-FZ1000 သည် အောက်ပါ ဆက်တင်များကို ချိန်ညှိရန်အတွက် ကင်မရာအတွင်းတွင် RAW-format ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Color Space Setting (sRGB / AdobeRGB), White Balance, Exposure Compensation, Photo Style, Intelligent D-range Control, Contrast, Highlight / Shadow, Saturation, Noise Reduction, Intelligent Resolution, Sharpness.
ပိုမိုပြောင်းလဲလွယ်သောအသုံးပြုခြင်းအတွက် DMC-FZ1000 သည် ပြင်ပ Flash (DMW-FL580L), Stereo / Shotgun Microphone (DMW-MS2) နှင့် အခြားသော အရာများနှင့် ပေါင်းစည်းပါသည်။ DMC-FZ1000 ၏ တိုးချဲ့ထားသော ပြောင်းလဲလွယ်မှုသည် ပုံမှန်အသုံးပြုနေကျဖြစ်သည့် bridge ကင်မရာ၏ အကန့်အသတ်ထက် ပိုမိုဝေးပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်များ
LUMIX FZ1000 Special Gallery သို့ သွားကြည့်ပါ- http://panasonic.net/avc/lumix/gallery/fz1000/
LUMIX FZ1000 4K နမူနာ Video
LUMIX FZ1000 မိတ်ဆက် Video
Flashes / ဗီဒီယို